नेपाली राजनीतिभित्र अन्धराष्ट्रवादको फैलावट ! – SaipalNews.com
नेपाली राजनीतिभित्र अन्धराष्ट्रवादको फैलावट !
काठमाडौं ५ फागुन । राजनीति अन्धराष्ट्रवादको उपज हो। अन्धराष्ट्रवादले जनता विभाजित गर्छ र स्वार्थबाट नीतिलाई निर्देशित गर्छ। हिटलर, ईदी अमीन, खमेरुज प्रत्यक्ष अन्धराष्ट्रवादकै उपज हुन। राजनीति र जनताको खाडल बढ्दा नयाँ नाराको खोजी गर्छ राजनीति।जनता ढाट्ने राजनीतिलाई जनताले विश्वास गर्दैनन र राजनीति अझै कडा र परम्परागत हुन जान्छ। जसले अन्धराष्ट्रवादको जन्मदिन्छ।
मानिसको आदिम स्वभाव आफू सुरक्षित हुनु हो। जंगली अवस्थाबाट समूह र समाजमा आइपुग्दा मानिस स्वार्थप्रेरित भइसकेको थियो। समूहको रक्षाले अन्धो बनायो मानिसलाई। समूह स्वार्थ केैलागि नेता चुन्यो। यही स्वार्थबाट राजनीति उदय भयो। राजनीति भित्रको स्वार्थले गुटउपगुट, समूह, उपसमूह जन्मायो। जनतालाई सत्य भनेन । जनतालाई गुमराहमा राख्दा राजनीति र जनताको बीचमा फरक आउँदै गयो ।
जनताका इच्छा पूरा गरेन राजनीतिले। राजनीति, जनताको हितको लागि राज्य, भूमि, सिमानाका कुराबाट राष्ट्रबादी हुन थाल्यो। बिदेशी हस्तक्षेपलाई राज्यसञ्चालनको गहना बनाउन थाल्यो। यसै गुट र समूहबाट आधुनिक राजनीतिको जन्म हुँदै गयो। राज्यभित्र जनता खुसी हुनु शासन हो।
गान्धी,नेल्सन मंडेला, महेन्द्रहरूले राष्ट्रवादको जन्म दिए। आज राजनीतिले यसलाई अन्धराष्ट्रवादमा परिणत गरेर राजनीति गरेको छ। अमेरिका ,यूरोप, विकसित देशमा अन्धराष्ट्रवादले काम गर्दैन ।त्यहाँ मानव अधिकार, कानुनको शासनमा राष्ट्रवादको प्रयोग हुन्छ र यसैलाई अन्तर्राष्ट्रिय वादको हतियार बनाइन्छ। अमेरिकामा काला जातिमाथिको दमन विकसित देशमा हुने जातीय विभेद, सिमानाका कुरा, मेक्सिकोमा बाल लगाउने विषयअन्धराष्ट्रवादकै नमुना हुन।
धर्मले समाजलाई सत्य सिकाउँछ। गीता, बाइबल, कुरानले सत्य उजागर गर्छ। राजनीतिलाई निर्देशित गर्छ। राजनीति सिकाउँछ तर राजनीति सत्य र निष्ठावान हुन सक्तैन। महाभारतकालीन राजनीति, रोमन साम्राज्य ,अटोमन साम्राज्य, सिन्धु घाँटीको सभ्यता, मुगल सभ्यता, शाहकाल, लिच्छवी काल, किरातकाल र शाहकालीन राजनीतिमा धर्मले राजनीतिलाई जोगायो।
तर राजनीति सत्य बाटोमा हिड्न सकेको छैन र सक्तैन। हाम्रो जस्तो धर्म र राजनीतिको आडमा राजनीति गर्ने शासन प्रणालीमा शासन व्यवस्था पारदर्शी ,उत्तरदायी हुन सकेन, सक्तैन । विभिन्न खालका स्वार्थ समूहहरूबाट राजनीति उपगुट र गुटमा अलमलिएको छ।
सुरक्षाको कारण राज्यको उत्पत्ति भएको हो। क्रमशः यसको उपयोगिता समूह हित, उत्थान, विकास, जाति रक्षा, सभ्यता र राष्ट्रियताको नाममा अगाडि बढ्यो। विकसित देशले जनताको हितलाई राजनीतिमा पूर्ण रुपमा स्वीकार गरे। अविकसित र पुरातन देशहरुले अतिराष्ट्रबाद र अन्धराष्ट्रवादको सहाराबाट राजनीति गरे ।भारत, नेपाल, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अफ्रिकन मुलुकहरुमा अन्तर राष्ट्रवादले राजनीतिलाई छोपेको छ।
स्वार्थको लागी विदेशीलाई गाली गर्ने, सत्तामा पुग्न शक्तिको चाकरी गर्ने, सत्तामा पुगेपछि शक्तिको पूजा गर्नेले राजनीति अवसरवादको जन्म दियो । नेपाली राजनीतिको गहिराइ यसै भन्छ । भाषा ,कला, संस्कृति, रहनसहन, जातजातिले राष्ट्रलाई बुझाउछ। नेपालमा यसै विषयमा बढी राजनीति हुन्छ। यसले राष्ट्रवादको सीमा निर्धारण गर्छ। जब यसमा राजनीति हुन्छ तब अन्ध राष्ट्रवादको जन्म हुन्छ।
गरिव देशहरु यसैका सिकार छन्।धर्म निरपेक्षता, जातिगत समानता, लैंगिक समानता, भाषिक स्वतन्त्रताले राष्ट्रलाइ राष्ट्रियतामा विलय गराउछ।र उदार राष्ट्रको जन्म हुनछ। यिनै विषयभित्र राजनीति गर्ने र अवसरको खोजी गर्ने राजनैतिक प्रवृत्तिले नेपालमा अन्धराष्ट्रवादको जन्म दिदैछ। यी विषय चुनावी नारा हुनु हुँदैनथ्यो। भारतले यस्ता विषयलाई चुनावी नारा कम गर्दैछ ।तर नेपालमा यो झन् बढ्दै गएको छ ।
विकसित देशमा प्रत्यक्षरुपमा राजनीति यि बिषयमा प्रवेश गर्दैन। यस्ता विषयमा देशहरुमा कानुनको शासन, मानवअधिकार ,प्रजातन्त्रका नाममा राजनीति हुनछ। विश्वव्यापीकरण सीमाबिहिन राज्यको अवधारणा हो।विश्व समानता, भातृत्व ,खुलापन, अवसरमा पहुँचलाई यसले प्प्रश्रय दिन्छ। राष्ट्रबाद भन्दा बढी जनताको जीवनको सुख खोज्छ विश्वव्यापीकरणले। आर्थिक लाभका कुरामा र अवसरमा पहुँच दिन्छ तर यसको उत्पादन समानता नै हो।
राष्ट्रवादलाई असीमित राष्ट्रियतामा विश्वव्यापीकरणले परिणत गर्छ। विश्वव्यापीकरणले राज्यको फैलावट भयो तर अवसरमा विभेद। यही विभेदले देशभित्र राजनीति खराबी ल्यायो। विश्वव्यापीकरणमा पहुच नपुग्नेले राष्ट्रीयताको नारामा अन्धराष्ट्रवाद राजनीति गरे । गर्दैछन्। र आतंकवाद, हतियारको किनबेच, लागु पदार्थको ओसारपसार, मानव बेचबिखनका गिरोहले कतिपय देशमा शासन गरेका छन् ।उनीहरूको शासन गर्ने शैली अन्धराष्ट्रवाद नै हो ।
राष्ट्रवादको नारा लिएर शासन गर्ने ,यथार्थमा राजनीतिमा स्वाबिमान नहुने र क्रमशः बिस्तारै गुलामी बन्दै जाने अबस्था कतिपय देशको छ । शक्ति सन्तुलन र अवसरको खोजी नभएर शासन सत्ता टिकाउने र अति राष्ट्रवादको नारा दिएर राजनीति गर्ने प्रवृत्ति नेपालमा बढ्दै गएको छ।अहिले नेपालको राजनीति पनि यसैको भुमरीमा फस्दैछ। नेपाली राजनीतिभित्र अन्धराष्ट्रवादको फैलावट देखिदैछ।
राष्ट्र ,निर्माणका लागि धर्म बन्धनमुक्त हुनुपर्छ। हिन्दू, जैन , ब्राह्मण मुस्लिम, क्रिस्चियन ,बौद्ध जे भएपनि सबैमा बन्धन लुकेको छ। यो बन्धन ररुन्जेल राजनीति सफा हुँदैन। नेपाली राजनीतिमा धर्मले जरा गाडेको छ ।अझै यसमा कति राजनीति हुने हो थाहा छैन। राजनीतिभित्र अतिबादको नारा लगाउने र यसैमा नेता जन्मिने परम्परा नेपालको नयाँ होइन। हिटलरले भनेका छन् देशको दुश्मन छैन भने नक्कली दुश्मन तयार गर ।
दुश्मन भएपछि जनता नेताको पछि लाग्छन। दुश्मन तयार गर्दैनौ भने महान नेता बन्न सक्दैनाौू ।ठूलो नेता पैदा हुन अशान्ति, हिंसा जरुरी देखिँदैछ। फेरि हामी अर्को राजनीतिक परिवर्तनको प्रतिक्षामा छौं। देशमा द्वन्द्व भएन भने राजनीति पार्टी फस्टाउँदैन भन्ने चरित्र हाम्रो जस्तो देशमा देखिएको छ। सधै द्वन्द खडा गर्छन्, शान्ति चाहन्छन् राजनीति पार्टीहरु। हिटलर ,चर्चिल ,लेलिन शान्तिका लागि लडे भनिन्छ तर यसतो राजनीतिले अशान्ति तयार गर्छ। राजनीतिमा दुश्मन तयार गर्न अति राष्ट्रवादको हतियार इतिहासदेखि अहिलेसम्म छ हामीमा।
नेतृत्वमा बस्नलाई राष्ट्रवादको कुरा गर्ने र जनताले विश्वास जित्न सफल हुने । कुर्सीमा अडिन छिमेकीसँग हारगुहार गर्ने, चर्का नारा बनाएर राजनीति गर्नु अन्धराष्ट्रवाद हो।यसै भित्र राजनीति गर्नेले देश बलियो हुँदैन। राजनीति बलियो हुँदैन । नेपाली राजनीतिको पछिल्लो घटनाक्रमले यस्तै देखाउँछ। पूर्ण रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्यमा पूर्ण पहुँच र आर्थिक वृद्धिले मात्र यस्तो राजनीतिलाई परास्त गर्न सकिन्छ ।
नेपालको राजनीति, गुटको विजय र पराजयमा विभाजित हुँदैछ ।राजनीति फुट्दा विदेशीको भूमिका देखिन्छ नेपालमा। राष्ट्रवादको नाराले राजनितीमा विजय ,पराजय हुन्छ,।पार्टीहरु बहुमत र अल्पमतमा पर्छन्। हामी सिमानाको राजनीति गर्छौ, यसैमा जनताको हितका कुरा गर्छौं। अति राष्ट्रवादले डोर्याएको राजनीति हो यो। नेताहरुलाई अमेरिका, भारत,चीन युरोपको पक्षधर हो भनिन्छ ।
राष्ट्रको स्वार्थलाई सूचना दिएर राजनीति गर्नु अन्धराष्ट्रवाद नै हो। एमसिसी जस्ता विषयमा नेपाली झन्डा लिएर जनता निस्कन्छन् ,राजनीति पार्टीले पहिले राम्रो भन्छन् ,तिनै नेताले विरोध गर्छन् किनरुरु गरिब र अल्पविकसित देशहरुमा यो समस्या धेरै छ।
नेपालमा २०७ सालदेखि हालसम्म तीन दर्जनभन्दा बढी सरकारहरु आए। थुप्रै राजनैतिकदल उदाए । फुटे, जुटे। छ वटा संविधान बने। पाँचवटा प्रणाली परिवर्तन भयो तर अझै विकास र राजनीतिले दिशा लिन सकेको छैन ।राजनीति घोषणापत्रमा लेखिएका कुरामा राजनीति हुर्दैन । २०१५,२०१९,२०४६,२०६४ का परिवर्तनहरु आफै भए या अरुबाट गरिए यो अझै प्रश्न नै छ। राजा बिरेन्द्रको हत्या घटना हो या दुर्घटना हो छुट्याउन सकिएको छैन। र का एजेण्डाहरु राजनीतिभित्र छन् भन्ने सुनिन्छ। यो प्रमाणित भइसकेको विषय हो।
हिन्दुत्व ,राजा ,संघीयताका विषयमा आफ्ना नारा हुन् या अरुका जनताले बुझ्नै सक्दैनन्। कालापानी ,महाकाली कोशी र गण्डक सम्झौता नेताले गरे या बिदेशीले गरे यो दस्तावेजले प्रष्ट पार्दैन। यहि नारा र उप नारामा राजनीतिले विजय प्राप्त गर्दै आएका छन्। स्थायी हुन सकेको छैन नीति। जनताले नेता चिन्दैनन्, भोट हाल्छन् र नेताको राष्ट्रिय चिन्तनमा प्रश्न गर्छन्।
जनताले विकास ,सुशासन ,समृद्धि र कानुनको शासनको हिसाबले राजनीति बुझेकै छैनन्। राजनीतिले यसका लागि जनतालाई केही दिएकै छैन। दुवै अन्योलमा छन। कडा र कठोर आश्वासन दिने र जनताले विश्वास गर्ने बिषय अन्धराष्ट्रवाद बाट प्रेरित छ। यसमा राजनीतिले नाफा र घाटा सहनु पर्दैन, सहानुभूति नै नेपाली राजनीतिमा जनमत भएको छ । जसले एमसिसी ,बेल्ट एण्ड रोड को बिरोध गर्छ राष्ट्रबादी ठहरिन्छ। जसले समर्थन गर्छ विरोधी, तर यी दुवै राम्रा विषय राम्रा हुँन , होइनन्,जनतालाई कसले प्रष्ट पार्ने। आगामी चुनावमा नारा बन्छन्। विरोधीहरु राष्ट्रबादी बन्दै जान्छन्।
आरक्षण ,सकरात्मक विभेद, संरक्षण ,समावेशीकरणले राष्ट्रवादलाई स्थापित गर्छ। स्थापित गराउँछ ।अतिराष्ट्रबादको सस्थागत अन्त्यको लागि गरिब देशमा यस्ता नीति आउछन। ल्याइन्छन्। विकसित देशमा यी विषय राजनीतिका नभई समानताका लागि आउने गर्छन्। मार्क्सको समाजवाद ,लेलिनको साम्यवाद, उदारवादको विकासको धारणा अन्ध राष्ट्रवादको सीमा घटाउन आएका धारणा हुन्। पुरातन राज्य निर्माणको दह्रो आधार हो अन्धराष्ट्रवाद।
नेपालमा भ्रष्टाचार, कानुन कार्यान्वयन नहुनु , राजनीति चलखेल, गुट उपगुट राजनीति , हुनुमा राज्य भित्रको परम्पराले काम गरेको छ। आजसम्म देश पराधीन हुनु परेन। देशकै लागि लड्नु परेन । उत्पादन ,उपभोग, उपयोग र वितरणमा लडाई गर्नुपरेन । त्यसैले हाम्रो देश कविला प्रणालीबाट माथि उठ्न सकेन।
भारतमा राज्य नीतिको एकीकरणले आधुनिक राज्यको धारणा आयो ।नेपालमा यो समस्या छ । धर्म ,लिंग, वर्ग ,भाषा नागरिकताको विषय राजनीतिमा मुख्य एजेण्डा हुन्छन्। यसै विषयबाट अति राष्ट्रबाद जन्मिन्छ र राजनीति फस्टाउँछ।अन्धराष्ट्रवादको भुमरी लाई स्वार्थ बनाएर नेताले देशभित्र राजनीति गरिरहन्छन् । जबसम्म जनताले अन्धराष्ट्रवादको स्वार्थलाई राजनीति र नेताबाट छुट्याउँदैन, तबसम्म उदार राजनीतिको विकास हुन सक्दैन।
तपाईहरुका पनि लेख,रचना,विचार छन्,भने हामीलाई Email. saipalnews76@gmail.com मा पठाउनु होला । हामी तपाईका लेखहरुलाई प्राथामिकताका साथ प्रकाशित गर्ने छौँ । धन्यवाद ।
एमाले र माओवादी शीर्ष नेताबीचको छलफल सकियो, यस्तो भयो सहमति !
केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनको (पूर्णपाठ)
एमाले एमसिसी पास गर्ने मूडमा छैन : केपी ओली
चारदिने भारत भ्रमण सकेर नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड स्वदेश फिर्ता